नेकपामा प्रचण्ड एकल अध्यक्ष ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपामा प्रचण्ड एकल अध्यक्ष !
काठमाडाैं । आइतवार बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई औंला उठाएर या त पार्टीको अध्यक्ष छाड्न या त प्रधानमन्त्री छाड्न चेतावनी दिए । बैठक सकिनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला बाहिर निस्केका नेता नेपालले आफू निकटका केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बैठकमा आफूले ल्याएको प्रस्ताव छलफल नभएको भन्दै गुनासो पनि गरेका थिए ।
‘६ वटा जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज र सह-इन्चार्जका विषयमा मेरो नीतिगत असहमति छ,’ नेपालले भने, ‘बैठकमा मेरो प्रस्तावउपर कुनै पनि छलफल नभएपछि मैले पार्टी विधान अनुसार एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई या त अध्यक्ष छाड्न या त प्रधानमन्त्री छाड्न भनेको छु । अस्ति शुक्रवार पनि मैले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल भएन, आज पनि भएन ।’ यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा आक्रोश झल्केको थियो ।
उसो त पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई कर्नरमा पार्न खोजेको भन्दै बारम्बार असहमति जनाउँदै आइरहेका छन् । पार्टी दुई अध्यक्षको मनोमानीबाट चलिरहेको भन्दै आफ्नो कुनै भूमिका नभएको उनको आरोप हमेशा रहने गर्दछ ।
के थिए नेता नेपालका प्रस्तावहरू ?
गत शुक्रवारको बैठकमा नेता नेपालले पूर्व एमालेका बाँकी रहेका तीन उपाध्यक्षहरूलाई सचिवालयमा ल्याउने प्रस्ताव पेश गरे । अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र भीम रावल पूर्व एमालेमा उपाध्यक्ष रहेका थिए । जम्मा ५ उपाध्यक्ष रहेकोमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति छिन् भने वामदेव गौतम पहिल्यैदेखि सचिवालयमा रहेका छन् ।
‘यदि विधि विधान र प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाउनु हुँदैन,’ नेता नेपालले भने, ‘मनोमानी ढंगले गर्ने हो भने जे गरे पनि भइहाल्यो ।’
नेता नेपालको यो प्रस्ताव अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको वरियतामा बढुवा गर्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावको काउन्टरमा थियो । ‘उहाँको वरियतामा मैले केही भन्न खोजेको होइन, यदि उहाँ म भन्दा सिनियर भएको भएर वरिययता बढाउन खोजेको हो भने पूर्व एमालेका ३ जना उपाध्यक्षहरूलाई पनि सचिवालयमा ल्याउनुपर्छ ।’
नेता नेपालले यससँगै पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको विषय उठाइरहने बताए । उनको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओली नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
प्रचण्ड पार्टीको एकल अध्यक्ष
केही दिनयता स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिएका प्रधानमन्त्री ओली पुनः सिंगापुर उपचार गर्न जाने तयारीमा छन् । मृगौला फेरेको १२ वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले डाक्टरहरूले ओलीलाई नयाँ औषधि चलाएका थिए । त्यसपछि उनको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको बताइयो ।
तर आइतवार संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सम्बोधन गर्न आएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिमा खासै सुधार नआएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । ‘स्वास्थ्य कमजोर भएपछि उहाँले सरकारको मात्र जिम्मेवारी लिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘त्यसो हो भने अर्का अध्यक्ष कमरेड स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुनेछ ।’
नेकपाभित्र एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको बहस पहिल्यैदेखि चलिरहेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र यस विषयलाई बारम्बार उठाउने गरेका थिए । तर आइतवारको बैठकमा नेता नेपाल पड्किएपछि प्रचण्डले सहजकर्ताको भूमिका निभाए । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यस्थितिलाई ख्याल राख्दै प्रचण्डले नेता नेपालले पेश गरेको प्रस्तावउपर खासै ध्यान दिएनन् ।
ओली सिंगापुरबाट फर्किनेबित्तिकै प्रचण्ड अध्यक्ष !
नेपाल निकट एक नेताले प्रधानमन्त्री ओली फलोअपका लागि सिंगापुर गएर फर्केलगत्तै प्रचण्डलाई अध्यक्ष सुम्पने तयारी रहेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यही ५ गते सिंगापुर जाँदैछन् । नेता नेपालले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमाथि मंगलवार छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको र त्यही छलफलले प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको उनले दाबी गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जानेछन् ।
पछिल्लो समयमा विभागको नेतृत्वमा विवाद देखिएपछि लामो समयसम्म सहमति हुन सकेको थिएन । तर अन्तिम समयमा प्रचण्ड लचक भएर स्कूल विभाग ईश्वर पोख्रेललाई नै छोड्न सहमत भएपछि विभागको नेतृत्वको विषय सल्टिएको थियो । विभागको नेतृत्वसँगै वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा ल्याउन प्रस्ताव गर्ने निर्णय पनि पारित भएको थियो । यी सबै अध्यक्ष ओलीका प्रस्तावहरू थिए ।
ओलीका प्रस्तावहरूलाई प्रचण्डले कुनै रोकटोक गरेनन् । बरू नेता नेपालले असहमति जनाईरहे । यही कारणले पछिल्लो समयमा ओली र प्रचण्ड मिलेर आफूलाई साइड लगाउन खोजेको बुझाइ नेता नेपालमा रहेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीका प्रस्तावहरूलाई निर्विरोध छलफलमा लगेर टुंग्याएपछि प्रचण्ड पनि ओलीतिरै लहसिएको विश्लेषण हुन थालेको थियो । तर स्रोतका अनुसार पार्टीको एकल अध्यक्ष प्रचण्ड हुने भएपछि सहजताका लागि प्रचण्डले ओलीको भनाइमा कुनै विमति जनाएका छैनन ।
भदौ ३ गते, २०७६ - १२:०१ मा प्रकाशित